भर्जिनिटी तोड्न कैटेरिनाले मागिन् ७ लाख ८० हजार डलर ~ The Nepal Romania
भर्जिनिटी तोड्न कैटेरिनाले मागिन् ७ लाख ८० हजार डलर
4:29 AM बिबिध, स्वास्थ्य/यौन No comments
तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । कोही केटीले आफ्नो भर्जिनिटीको लिलाम गर्न सक्छ ? त्यो पनि अनलाईनमा ? ब्राजिलकी एक २० बर्षकी किशोरीले आफ्नो भर्जिनिटी लिलाम गरेकी छन् । जसको मूल्य रहेको छ ७ लाख ८० हजार डलर । कैटेरिना मिग्लोरिनी नाम गरेकी किशोरीको भर्जिनिटी खरिद गर्नका लागि सयौं युवाहरु लाईनमा बसेका थिए । तर, धेरैको भिडबाट जापानका नात्सूले लिलामी बढाबढमा सवैलाई उछिन्दै ७ लाख ८० हजार तिरेर उनको भर्जिनिटी तोड्ने भएका छन् । फिजिकल एजुकेशनकी छात्रा रहेकी कैटेरिनाको भर्जिनिटीका लागि नात्सुले नात्सूले भारतका रुद्र चर्टर्जी, अमेरिकाका के जैक मिलर र जैक राइटलासँग कडा प्रतिष्पर्दा गर्नुपरेको थियो । कैटेरिनाले उक्त रकम गरिबहरुका लागि घर बनाउन खर्च गर्ने बताएकी छन् । उनले नात्सुले ७ लाख ८० हजार डलर तिरेपनि केही शर्त पुरा गर्नुपर्ने बताएकी छन् । सर्तकाबारेमा उनले भनेकी छन्-’सेक्सका क्रममा कुनै पनि सेक्स टोय प्रयोग गर्न पाईदैन, कण्डमको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ भर्जिन
सावित गर्नका लागि उनले जस्तोसुकै टेस्ट गर्न पनि तयार रहेको बताएकी छन् ।
उल्लेखनीय यो छ कि उनका आलोचकहरुले उनलाई कल गर्ल भनेपनि जिन्दगीमा केवल एक पटकमात्र यो विजनेस गरेको हुँदा आफु कल गर्ल नभएको बताईन् । उनले भनिन् एउटा फोटो खिज्दैमा कोही फोटो ग्राफर हुनसक्दैन् । त्यसैले एकपटक पैसा लिएर सेक्स गर्दैमा कोही कल गर्ल नहुने उनको दाबी छ ।